Fanafoanana ny ampahany voalohany amin’ny hetra tsoahana amin’ny vola miditra, fanavaozana ara-drariny ve ? · Global Voices teny Malagasy
Fanafoanana ny ampahany voalohany amin'ny hetra tsoahana amin'ny vola miditra, fanavaozana ara-drariny ve ?
Voadika ny 01 Janoary 2020 11:08 GMT
Ahoana no fitsinjaràna ny hetra alaina amin'ny vola miditra ? tao amin'ny SNUL – CC BY 3.0
Ity no fanambaràna pôlitika amin'izao fotoana izao aloha, andro iray taorian'ny kabariny faharoa momba ny pôlitika ankapobeny nanoloana ireo solombavambahoaka. Ny Alarobia 17 Septambra 2014 ny praiminisitra Manuel Valls dia nandroso hevitra ny hanafoanana ny ampahany voalohany amin'ny hetra tsoahana amin'ny vola miditra. Ndeha hiverenantsika ny momba ireo fanamby niteraka io fanambaràna io sy ireo fiovàna mety haterany.
Tokantrano 9 tapitrisa no voakitika
Araka ny lazain'i Christian Eckert, sekreteram-panjakana misahana ny tetibola, Frantsay sivy tapitrisa no mety hiharan'io fepetra tsy mbola nisy toa azy io. Izy ireo no hisitraka io hetra nohamaivanina io. Ireo olona tsy mandray afa-tsy 6.011 (fetra farany tsy hakàna hetra) sy 11.991 euro isantaona no hita ao anatin'io vondrona io. 5,5% ny vola miditra azo hakàna hetra amin'ny ampahany no ao anatin'io ampahany voalohany io.
Voalohany indrindra aloha dia ilaina ny mampahatsiahy fa ny hetra alaina amin'ireo olompirenena frantsay dia nofaritana fotsiny ho araka ny taha tokana mifanaraka amin'ny ampahana vola miditra eo anelanelan'izay voafaritra ho an'ilay ampahany mifanaraka amin'io taha io. Izany hoe raha mandray 15.000 euro isantaona ny olona iray dia manana 11 991 euros hakàna hetra 5,5% ary ny 3 009 euros ambiny kosa hakàna 14% (taha mifanaraka amin'ny ampahany faharoa amin'ny hetra alaina amin'ny vola miditra).
Ny fanafoanana ny hetra alaina amin'ny ampahany voalohany raha ny marina dia fanenjehana ilay ampahany faharoa izay ho lasa ampahany voalohany handoavana hetra. Raha ambara amin'ny teny hafa, ilay olontsika tetsy ambony mandray 15.000 euros isantaona dia tsy hakàna hetra 5,5% intsony amin'ireo 11.991 ampahany voalohany tamin'ny vola miditra aminy, fa tonga dia 14% amin'ny vola rehetra miditra aminy. Raha fintinina izany, dia fampitomboana ny alaina amin'ireo olona rehetra mpandoa hetra ka mampiditra mihoatra ny 11.991 euros isantaona ilay izy.
Fepetra iray sarotra tanterahana
Emmanuel Macron, Minisitry ny Toekarena – Sehatra ho an'ny daholobe
Rehefa jerena amin'io zoro io, dia toa tsy ara-drariny mihitsy io fepetra io ary azo heverina ho toy ny fomba iray ankolaka ho fampiakarana ny taha fampidiranketra avy amin'ny vola miditra no sady fampihenàna ny isan'ireo mpandoa hetra. Izay no antony angamba mahatonga ny governemantani Manuel Valls ho eo andalam-pametrahana fanavaozana iray izay mety hanafoana tsotra izao ilay ampahany voalohany. Amin'izay fotoana izay, ireo vola miditra hatramin'ny 11.991 euros dia tsy hisy hetra ary tsy hanomboka alohan'io ny fetran'ny ampahany voalohany hakàna ilay 14%.
Fa miteraka olana iray hafa izany, Hahazo tombony amin'ilay fampidinana ny hetra ihany koa ireo olona mpanefoefo, raha toa ka ireo mpandoa hetra tena mahantra no tokony ho ampian'iity fepetra ity. Mba ho famahàna izay olana izay, famatsiambola an'ilay fepetra no naroson'ny governemanta, amin'ny fampiakàrana ireo taha natao ho an'ireo ampahany ambony, ho hita eo hoe manomboka amin'ny haavo hatraiza.
Aoka ho tsaroantsika fa tamin'ny 2009, nandraman'ny filohan'ny Repoblika, Nicolas Sarkozy, ny nanafoana ny ampahany voalohany tamin'ny hetra, saingy nifanehatra tamin'ny sakan'ny lalàm-panorenana izy ka dia maty an-karanany ilay tetikasany. Tamin'io fotoana io, nisy ny tarehimarika naroso nilazàna fa ny fepetra tahaka izany dia mety hiteraka fahabangàna 3 hatramin'ny 5 lavitrisa euros ao anaty kitapombolan'ny fanjakàna (3,3 lavitrisa hoy ny tao Bercy). Antontambola tsy azo tsinontsinoavina ao anatin'ny vanimpotoana iray izay ikarohan'ny mpanatanteraka izay rehetra mety ho fampidirambola rehetra azo atao. Amin'izao fotoana izao, amin'ireo tokantrano 37 tapitrisa tokony handoa hetra, 16 tapitrisa monja no azo hakàna hetra ary 9 tapitrisa no voakasika amin'ilay fampidinana noeritreretina.
Mampametraka fanontaniana momba ny mahamety azy io tetikasa io. Ny hetra alaina amin'ny vola miditra dia hetra amin'ny maha-olompirenena ary napetraka mba hahafahan'ny tsirairay mandray anjara amin'ny fiainan'ny fiarahamonina iraisana, arakaraky ny vola miditra aminy. Tato anatin'ny taona vitsivitsy farany, tsy ho hita isaina intsony ireo fepetra fanesorana hetra, ireo fanalefahana hetra, na fampidinana ny ampahan-karàma azo hakàna hetra… Arakaraka ny hisian'ireny fanavaozana ireny, tsy mitondra afa-tsy ampahany kely ao amin'ny kitapombolan'ny fanjakàna intsony ny hetra alaina amin'ny vola miditra, mifanohitra amin'ireo hetra hafa toy ny TVA. Ny mampihomehy amin'izany rehetra izany dia ny hoe natao mba hamoronana hetra iray ara-drariny kokoa ireny fepetra ireny, saingy mampitombo lanja ny TVA, hetra iray tsy ara-drariny kokoa, satria tsy anavahana na iza na iza ny fandoavana azy. Farany, Alohan'ny hampanan-kery izany rehetra izany, mbola mila ny fankatoavan'ny antenimiera ilay volavolandalàna…